China mveliso kunye nabenzi | Cepai
Imigangatho yamasango e-Standard FC ihambelana ne-API 6A 21th Edition, kwaye isebenzise izixhobo ezifanelekileyo kwinkonzo ye-H2S ngokomgangatho we-NACE MR0175.
Ubushushu Class: DB
Ukuphinda-phinda kwamkelwe ukuze kuphumeze ubuchule bokubhola-kakuhle koxinzelelo lwebhalansi. Ukuphindaphinda okuninzi kunokuthintela ungcoliseko lweoyile kunye nokuphucula isantya sokugrumba kunye nokulawula ukuqhushumba ngokufanelekileyo. Ukuphindaphindeka kokuxinana kubandakanya iivelufa zokuminxeka, iivalves zamasango, imibhobho yomgca, izixhobo, izilinganisi zoxinzelelo kunye nezinye izinto. I-CEPAI Drilltech inikezela ngeendlela ezahlukeneyo ukusuka kwi-2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", ngoxinzelelo olusebenzayo 2,000PSI ~ 20,000PSI ngokwe-API SPEC 16C / 6A.
Bulala izinto ezininzi
Ukubulala ukuphindaphindeka kwezixhobo eziyimfuneko kwinkqubo yolawulo lokumpompa ukumpompa ulwelo lokomba kumgqomo wamanzi okanye ukujova amanzi entloko. Iqukethe iivalves zokutshekisha, iivalves zamasango, igeyiji zoxinzelelo kunye nemibhobho yomgca. I-CEPAI ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubulala ukusuka ku-2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", ngoxinzelelo olusebenzayo 2,000PSI ~ 20,000PSI ngokwe-API SPEC 16C / 6A.
Ukuphindaphinda udaka okuninzi kuqukethe ivalve yodaka, uxinzelelo oluphezulu lomanyano, uxinzelelo oluphezulu lomanyano, ite, ithumbu loxinzelelo oluphezulu, ingqiniba, igeji yoxinzelelo, kunye nokudityaniswa kwepup njlnjl. 2,000PSI ~ 10,000PSI ngokwe-API nganye ye-16C / 6A
Ukuqwalaselwa okusemgangathweni kwemithi yovavanyo lomphezulu iyafumaneka. Ezi zinto zihlala zine-swab, inkosi ephezulu, imveliso kunye nokubulala iivalve zemigca. Uyilo lukwakhona kunye nevalve eyintloko esezantsi kwe-swivel. Uvavanyo lomphezulu okanye ungenelelo oluLungileyo Imithi iza ngobukhulu ukusuka kwi-3 1/16 "ukuya kwi-7 1/16" kunye ne-5,000 psi ukuya kwi-15,000 psi (amaqondo obushushu ukusuka -50 ° F ukuya kuma-350 ° F). Ukucwangciswa kwesiko kuyafumaneka kwakwenziwa isicelo.
Uxinzelelo oluphezulu lutshitshise kwaye lubulale izinto ezininzi
Ngokudibanisa izinto ezinje ngokuLungisa kunye nokuTshixa okuhle, iiHydraulic Drilling Chokes, API Flanges, Hammer Lug Unions, API Studed Crosses and Tees, Adapter, Spools, Blinds, Crossovers and Fittings, Choke Control Console, High Pressure Manifold Fittings, High Pressure Gate Valves (Incwadana yemiyalelo kunye neeHydraulic Gate Valves), Iiplagi zoPhuculo oluPhezulu, iiNqanawa eziQinisekisiweyo, iiTi eziQokelelweyo, iiNdawo eziLinganisiweyo zoMbane, iNdibano yoVavanyo yoXinzelelo, iZilinganisi ezivavanyiweyo zoFakelo kunye neeValve zeSango, iiVali zodaka, Ukufakwa kweZilinganisi eziNinzi eziPhezulu , Uxinzelelo oluPhezulu lokujonga iiValves, iHammer Union yenze iiTe kunye neengqini ngokuxhomekeke kwisicelo esivela kubukho bethu bempahla, i-CEPAI inokulawula umgangatho kunye neenkqubo zeenkqubo ezinzima kakhulu. I-CEPAI inomdla wokusebenza nabaxhasi ukubonelela ngesisombululo esifanelekileyo kwiiprojekthi ezizodwa. Apho kufanelekileyo okanye ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi kwaye zinikezelwa ziqinisekiswe ngokupheleleyo ngabasemagunyeni abazimeleyo.
Okulandelayo: IINTLOKO ZENKQUBO